कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विशाखाले गरीन आ’त्मह’त्या ! - Nepali in Australia
कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विशाखाले गरीन आ’त्मह’त्या !
April 5, 2021 autherLeaveaComment on कैलाली टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विशाखाले गरीन आ’त्मह’त्या !
कैलाली टिकापुर नगरपालिका निवासी विशाखा विष्ट ले गए राति आ’त्म’ह’त्या गरेकी छन् । आ’त्म’ह’त्या को खा’स कारण भने अहीले खु’लिसकेको छैन । हाल उनी टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुरमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिन ।
घ’ट्नाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहे पनि डि’प्रे’शन मा आएर आ’त्म’ह’त्या गरेको हुन सक्ने अ’नुमान गरिएको छ । उनकाे मृ’त्यूको खबरले टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा एक दिन शो’क बि’दा समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लामा मन्दिरमा पूजा गर्न गएका एक जनाको ल’डे’र मृ’त्यु भएको छ। जिल्लाको पु’नर्वास नगरपालिका -९ ध’नसिया बस्ने ४३ वर्षीय सर्बे सुनारको आइतबार मृ’त्यु भएको हो। मन्दिर प’रिक्रमा गर्ने क्रममा स’र्बे सु’नार ल’डे’र बे’हो’स भएको बताइएको छ।
उपचारको लागि धनगढी ल्याउने क्रममा मृ’त्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अमरबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार मृ’त’क सुनार र उनकी श्रीमती बे’लमति सु’नार आइतबार विहान घरदेखि २ सय मिटर टाढा रहेको न’वदुर्गा मन्दिरमा पूजा ग’र्न गएका थिए। Source:esidhakura
जनयु’द्धपछि च्याउ खेतीमा लागेकी दिलकुमारी परिन् विश्वका उत्कृष्ट १० महिलाको सूचीमा